Halkee marayaan dadaallada la'isugu soo dhoweynayo Qoor Qoor iyo Saciid Deni? - Caasimada Online
Home Warar Halkee marayaan dadaallada la’isugu soo dhoweynayo Qoor Qoor iyo Saciid Deni?
Halkee marayaan dadaallada la’isugu soo dhoweynayo Qoor Qoor iyo Saciid Deni?
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxa ka socda dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed oo iska horjeedo, iyada oo ay sidoo kale ku sugan yihiin madaxda maamullada Jubbaland, Puntland, Galmudug iyo HirShabelle.
Ilo ku dhow kulamadaasi ayaa sidoo kale Caasimada Online u sheegay in wada-hadallada la’isugu soo dhoweynayo labada dhinac ay marayaan meel wanaagsan, islamarkaana rajada ay tahay in xal waara laga gaaro mad-madowgaasi siyaasadeed.